Maitiro ekudzoreredza hushamwari hwakaputsika ▷ ➡️ Ziva Pamhepo ▷ ➡️
Nzira yekudzorera sei ushamwari hwakaputsika. Shamwari dzakafanana nemhuri yedu. Isu tinovaudza zvakavanzika zvedu, ivo vari parutivi rwedu munguva dzakanaka uye dzakaipa, uye dzinokosha muhupenyu hwedu. Asi, nguva nenguva, hatibvumirani uye kusawirirana kungamuka.
Kupokana panyaya uye kukurukura maonero akasiyana-siyana chinhu chakajairika, asi dzimwe nguva, hondo idzi dzinopedzisira dzaunza chimwe chekutya kwedu kukuru: kuputsa ushamwari neshamwari yako huru. Muchinyorwa chinotevera, tiri kuzokudzidzisa nzira yekudzoreredza ushamwari hwakaputsika.
Heano matipi anodiwa ekuti uve nehushamwari hukuru zvakare, usarasikirwe!
1 Nzira yekudzoreredza hushamwari hwakaputsika nhanho nhanho
4 Remekedza nzvimbo yavo
5 Bvisa kudada kuti uwanezve ushamwari hwakaputsika
Nzira yekudzoreredza hushamwari hwakaputsika nhanho nhanho
Kana tine shamwari yechokwadi, chatinopedzisira kuda ndechokuti ushamwari huparare. Izvi shamwari dzakakosha kwazvo muzuva redu nezuva, nokuda kwechikonzero ichocho tinovimba navo zvakanyanya uye tinovimba nekuvapo kwavo uye maonero avo mune zvakawanda zvehupenyu hwedu. Kana ushamwari hwaparara, unofanira kuedza zvose zvinobvira kuti udzorere uye nokuda kwechikonzero ichocho isu tiri kukubatsira nematanho aya.
Zvakakosha kunzwisisa zvikonzero zvekurwa kuitira kuti iwe ugone kuziva zvakaitika uye edza kuzviisa munzvimbo yemumwe. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iwe unofanirwa kutanga kuongorora kana kurwa kwakatoitika nekuda kwechikonzero chimwe chete ichi uye kuti ungagadzirisa sei nyaya iyi mune ramangwana.
Imwe pfungwa yekuongorora muushamwari hwenyu ndeye dai maive makanaka musati marwa. Kana mhinduro iri hungu uye uchifunga kuti zvakakodzera, ita nepaunogona napo kuti udzorere pamwe chete.
Mushure mekuwana chikonzero chekurwa uye kana zvakakodzera kutangazve hushamwari uhu, zano ndero taura zvakaitika, chero muri vaviri muchigona kutaura nekuratidza zvinogumbura. Chinokosha ndechokuti panguva ino vanogona kuva vakatendeseka kune mumwe nomumwe uye kuedza kugadzirisa zvakaitika.
Rimwe zano nderekuti usabva padambudziko guru: chikonzero chekurwa. Zvakakonzerwa nemukomana here? Makuhwa pamusoro pako? Pasinei nehurukuro, zvakakosha kubata ronda uye kutaura pamusoro pezvose zvakaitika.
Remekedza nzvimbo yavo
Kana shamwari yako ichida nzvimbo uye kuti ibve pauri kwekanguva, iremekedze. Tinofanira kuyeuka kuti zvinhu hazvigoni kufanana nekare, uye zvinotora nguva kuti maronda apore. Asi, kana iwe uchida chaizvo kudzoreredza ushamwari hwako, zano nderekuita nhanho nhanho.
Usamuremedza, mupe nguva yekufunga nezveushamwari hwenyu.
Mubvunze kuti ari sei, asi pasina kunyanya kupindira.
Hushamwari hunogadzirisa nekufamba kwenguva uye nezviitiko zvitsva.
Bvisa kudada kuti uwanezve ushamwari hwakaputsika
Kufanana nevanhu vese, tine hurema uye tinokanganisa. Chinhu chakakosha ndechekuti isu tiri kukwanisa kuvaziva uye kuedza kuvandudza neimwe nzira. Kuomesa musoro, kutaura zvisingafadzi uye kugara uchinonoka ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinopedzisira zvaparadza ushamwari kusvika kukonzera kurwa kusingakoshi.
Izvi zvidiki zvidiki zvisingafadzi kune mumwe, isu tinogona kusazviita nemaune, asi isu tinofanira kuzviziva kuti tiite. kukwanisa kuzvigadzirisa uye kushanduka kuvandudza kudyidzana boka neshamwari dzedu dzose.
Kubva chemada.online Tinovimba kuti mazano aya anokubatsira kuziva nzira yekudzorera ushamwari hwakaputsika uye kuti, zvishoma nezvishoma, zvese zvinodzokera kune zvakajairika neshamwari yako.